Olee uru ndị ga - abara n’azụỤkwụN’owuwu ụlọ?
N’ọrụ owuwu owuwu, a pụrụ ikwu na ụlọ ọrụ ahụ dị ebe nile. Anyị ekwesịghị ịma ọha na ihe mere anyị ji mara ya. Mgbe a na - echebe ụlọ ọrụ ahụ, ọ ga - enwe ihe ndị dị ukwuu na ike karịa ụgwọ ndị ọzọ. Ọ bụrụ na e jiri oge e ji akụkụ nke a, ọ na - echekwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ pasent 30 nke ihe ndị ahụ. Nke a dị mkpa ka ọ dị mkpa n’ihi ụkọ nke ikike.
Ọ bụrụ na e jiri ihe ndị ọzọ tụnyere, ụlọ ọrụ ahụ pụrụ ịdị mma, a pụrụ ijide n’aka ya mee ihe owuwu ụlọ. Mgbe a na - eji akụkụ ahịa, a pụrụ ime atụmatụ ya dị ka ihe osisi ndị a na - eme atụmatụ. Ma e jiri tụnyere ihe ndị e jikọtara n’aka ọdịnala, ọ pụrụ inwe àgwà ka mma, mee ka ọganihu owuwu dị ngwa ngwa, ma mee ka oge owuwu ahụ dị mfe n’ụzọ dị irè.
Ụlọ ụlọ owuwu nke na - emezu ihe ndị a chọrọ pụkwara ịkwado ọrụ na ụkpụrụ ndị a chọrọ. Ọ pụrụ ịrụ ụkpụrụ na ụda dị ka ụkpụrụ nchebe si dị, bụ́ nke pụrụ ijide nweta ihe ka mma mgbe a na - enwe mma. Ụkpụrụ a bụkwa ọrụ owuwu a tụworo aro. Ọtụtụ ndị na - emepụta ụbụrụ na - agbalị ndị ọrụ kasị mma na nkànikal ha n’echiche nke ewupụta bụ ihe ọhụrụ na mmalite, bụ́ nke pụrụ ijide n’ụzọ dị irè na ụlọ ọrụ ahụ nwere ikike karị.
Ịgba ụgbụ ụlọ rụ pụrụ ebelata oge a na - ewepụta akụkụ n’akwụkwọ akụkụ ma belata ụgbụ nke ụgbụ ụlọ. Ọtụtụ n’ahụ́ a na - enwe n’ahụ́, ma ọ na - enwe ezigbo ike. Ebe ọ bụ na a na - adịghị mfe igwu ọnụ, ọ ga - egosi na e nwere ike ịna - egbukepụ, bụ́ nke nwere ike ime ka a ghara ịna - eme ka a ghara ịna - egbukepụ. Otú e si rụọ ụlọ ọrụ dị nnọọ ukwuu, iji ihe a mee ihe, mmetụta ahụ ga - adị elu.
Ochie:Olee otú e si eme ihe ndị e ji eme ihe?
Ọzọrụ:Olee otú ị ga - esi amata ọdịdị nke ụgbọ mmiri e ji eme ihe?
Olee otú e si eme ihe ndị e ji eme ihe?
Olee ihe e ji eme ihe?Ụkwụ?Ebe ọ bụ na mmadụ nile nwere bọl nrụgide dịgasị iche iche n’ụgbụ ụlọ a na - egbochi ụlọ, a pụkwara ịkpọ ya ọkụ mgbe a na - anọ. Ebe ọ bụ na owuzi nke ụgbụ owuwu dị nnọọ ike,...
Olee otú ị ga - esi amata ọdịdị nke ụgbọ mmiri e ji eme ihe?
Otú ị ga - esi dị icheỤkwụ?Dị ka ihe e wuru ụlọ a ma ama, ụgbụ ụlọ na - aba uru dị ukwuu karịa ụzọ e si ewu ụlọ. N’etiti ha, anyị ekwere na ume dị ike, nakwa ọrụ nke e ji okpomọkụ n'okpo, indution n'ụ...